Cimilada sii kululaaneysa waxay goyn kartaa maalmo heer kul ah | Saadaasha Shabakadda
Tani waa waxa daraasaddii ugu horreysay ee ku saabsan cimilada wanaagsan ee ay daabacday joornaalka sayniska ee Isbeddelka Cimilada uu shaaca ka qaaday. Maalmahaas qumman ee aan kuleylka, qabowga iyo kuleylka badan laheyn, waa laga goyn karaa mustaqbalka iyadoo ay sabab u tahay kuleylka adduunka ee meelo badan oo adduunka ah.
Meelaha ugu saameynta badan waxay noqon doonaan kuleylaha, in kasta oo ay sidoo kale jiri doonaan meelo aan ku raaxeysan doono maalmahan, sida Yurub ama Seattle.
Maalmahaas oo cimiladu kugu martiqaadeyso inaad banaanka joogto, ha ahaato jimicsi, la ciyaar jimicsi qoyska ama si fudud ugu raaxeyso banaanka, waa kuwa lagu garto kuleylka inuu u dhexeeyo 18 iyo 30ºC, qoyaan aad u hooseeya iyo daruuro dhaadheer oo keliya.
Sida lagu sheegay daraasadda, 30-kii sano ee la soo dhaafay waxaa jiray 74 maalmood oo leh shuruudahaas, laakiin laga bilaabo 2035 waa laga dhimayaa, marka hore 70 lagamana dhigayo 64 labaatankii sano ee ugu dambeeyay qarniga. In kasta oo, dabcan, aysan waxyeello u geysan doonin dhammaan aagagga.
Kuwa ugu badan ee dhibaatadu soo gaadhay waxay noqon doonaan Rio de Janeiro, oo celcelis ahaan 40 maalmood oo cimilo fiican ka yar tahay; Miami, oo leh 32 maalmood ka yar; Washington, 13; Atlanta 12, Chicago, 9, New York, 6; Dallas, 1. Inta badan Afrika, koonfurta Aasiya, waqooyiga Australia, iyo bariga Koonfurta Ameerika ayaa sidoo kale saameyn doona. Dhinaca kale, meelaha sida aadka ah uga faa’iideysta, halkaas oo tirada maalmaha wanaagsan ay soo bixi doonaan waa Seattle, Los Angeles, England iyo waqooyiga Yurub.
Saynisyahannadu waxay diiradda saaraan cimilada daran iyo sida ay uga sii dari karto maaddaama celceliska heerkulka guud ee adduunku uu sare ugu sii kacayo cilmi-baadhistooda, taas oo gacan ka gaysanaysa kor u qaadista wacyiga waxa dunida ka dhacaya iyo qaadista tallaabooyin looga hortagayo xaaladda ka sii dara.
Waad akhrisan kartaa daraasadda oo dhammaystiran Halkan (Waa Ingiriis).
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Kulaylka adduunku wuxuu goyn karaa maalmo heer kul ah